NYI LYNN SECK 18+ DEN: ရှေးဟောင်းရန်ကုန်
Posted by NLS at 2/16/2012 10:34:00 PM
4 Responses to “ရှေးဟောင်းရန်ကုန်”
[မှတ်ချက်။ ရှေးက ဦးဝိစာရလမ်းကို Voyles Road ဟုခှောသည်။
ှုဦးဝိစာရလမ်းအပေါ်ပိုင်းကိုတော့ ရှေးက တိုင်းဂါး
TDL< 34, 40 added
JBRS CD ၀ယ်လိုက်တာလား..။ ဟီး။ တချို့ ဟာလေးတွေတော့ နဲနဲခြင်းစီ ရှိတယ်။ ဂျာနယ်ထုတ်မလား. ကိုညင်းဆက်.. JMBS ?း)